May 21, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Wararka Maanta 6
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dhawaan deegaanada Maamulkas laga hirgelin doono mashaariic kala duwan,isla markaana ay ka qeyb qaadan doonaan dalalka Itoobiya iyo Shiinaha.
Waxa uu sheegay in Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland,sida wasiirka Ganacsiga iyo Wasiir kuxigeenka Maaliyadda ay u ambabaxeen dalka Itoobiya,si dowladda Itoobiya ay kala hadlaan arrinta dhismaha Kastamka Canshuuraha gobolka Mudug oo uu qorshihiisu socdo.
Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intasi ku daray in isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay tegi doonaan dalka shiinaha,isla markaana dowladda dalkaasi ay kala hadli doonaan mashaariic uu qeyb ka yahay dhisida Garoonka Diyaaradaha Magalada Gaalkacyo iyo mashaariic kale.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ya tan iyo markii la doortay waxaa uu dalka dibadiisa safr u aaday dalka Isutaga Imaaraadka Carabta,isaga oo madaxda dalkaasi la soo saxiixday heshiisyo ku saabsan mashaariic uu Imaaraadka ka fulinayo Puntland.
Wararkan uun la leeyahay madaxweyne Puntland ah baa dal hebel “mashaariic” ka soo saxiixay miyaa mar na wax la iska wayddiiyay macnaha dbabta ah ee laga wado? Biyadhacaygu waxaa weeyaan in aanay caddeyn mashaariicdani waxa ay yihiin iyo qaabka loogu fulinayo – ma wax lagu deeqay baa? Ma qandaraas dawladahaas/shirkadahaas canshuurta shacabka lagu bixinayo baa? Ma heshiisyo musuqmaasuq ku salaysan oo ay madaxdu mise ganacsiyo ay ku lug leeyihiin mulkiileyaal la yihiin baa?
Waxaa kale oo iyana meesha ku mudan shu’aasha ku saabsan dariiqa ay madaxdani u marayso heshiisyadaas iyaga ahi iyo in uu geyiga ka jiro nidaam dawli ah ee min biddaaya ilaa nihaaya wax kala dhisaya, wax kala socda oo kormeer iyo la xisaabtan rasmi ah madaxdan ku haya. Sababta aan arrimahan nalka ugu ifinayo ayaa ah in ay iiga dhex muuqato dhaqan afrikaankii xumaa ee qaaraddan ragaadka iyo rafaadka ku gadaamay maadaama aan madaxda lala xisaabtamaynin oo afka uun lagaga dhawaaqayo “mashaariic” aan waxa ay yihiin dhab ahaan loo ogayn. Dawladnimo ma aha sida wax loo wado.
Dad ka qaafilsan xaqiiqooyinka ku xeeran hab dhaqanka ganacsi iyo dhaqaale ee caalamka mise na ay waddaniyadi ku weyntahay baa hawraartayda qalad ugu fasiran doona in aan mucaarad mise muddiic ku ahay Puntland. Waa kuwa badanaa ba madaxweyne mar ba dayuurad saaran ka aaminsan in ay sharaf iyo dawladnimo muujinayso ee ah wax lagu faano. Ma se aha sida qaalibku yahay.
Dadkani jibbada waddaniyeed iyo magaca reereed ee wax kasta kala weyn ayaa ka indhasaabaya siraha aalaa ba madaxda Soomaaliyeed ugu qarsoon sababaha ay jagada iskugu soo sharraxaan in loo igmado. Waxaa sababahaas gundhig u ah ta iskeeda u cad ee ah in ay iyaga, xulufadooda iyo ehelladoodu ka taajiraan. Danooyin kale ee u sireysanina way ku fushadaan.
Shacab aan lahayn awood dimuqraaddiyeed ee madaxda cabsi galin karta iyo xeerar iyo qawaanin xakameyn kara oo ayna ugu sii darsameen aqoon la’aan baaahsan ee ka haysata shaxda siyaasadeed iyo musuqmaasuqa ku xeeran iyo dareenka casabinimo, xoolahooda oo xoog iyo xeelad ba lagu boobayo ayaa sharaf iyo dawladnimo loogu ekeysiinayaa. Xaqiiqooyinkaas baa aniga iyo dad dhif iyo naadir ah inoo muuqda oo aynu si xun uga dhiidhiyaynaa.
Dowladdii Maxamuud Saleebaan Sharci ma qabto.
Kutub Alle ma qabto.
Sharci Federaal ma qabto
Sharci Maamul Goboleed ma qabto
Sharci Caalamka ma qabto
Caqliga eey ku sucoto waa Hunguri xagee baad wax ka heshaa?
Hunguriga haduunan xad laheyn waan naqaaan magaca uu leeyahay.
Soomaalida waxeey tiraah “Nin hunguri kaa qaado seefi kaa qaado.”
Hungurigaasna xoolihii lagu soo helo nasiib darro waxuu ku dambeeyaa jeebkii hal reer kaliya Maxamuud Saleebaan.
Majeerteenkii kale gaajo, Hartigi kale gaajo. Hal reer kaliya aa ku xoogeysanaayo. Hadda waxaa la marayaa heer hadii reeraha kale qeyliyaan in aan xataa la dhihin war waad dhawaaqdeen maxaad tiraahdeen.
Gunnimo qarka u saaran.
Waa maamul ku faano dowladnimo haddana ma laha:
Baarlamaan xor ah
Saxaafad oo xor ah
Haddana rabo siyaasadda Federaalka in eey u meeriyaan ee dhahaan dowladnimo ayaan daadinay.
Balo Hooyadi Federaalka.
Maxamuud Saleebaan was inaga! Puntland waa inaga. Ninkii doonayow maamul Puntland waa inqad garoowe Ku tartantaa. Wakaas hadalku. Wax a Taman la xagxagan Beesha puntland we maxamuud Saleebaan.
Puntland waa caafimaad badan.
Warangali majeeryeen dhulbahante axmed härtill. Noolada guuleysta. Ogow cadowgaaga kugu xeeran. Digtoonaada. Waligiin.